News - Foshan Smartroof International Co. , Ltd.
PVC အမိုး: သင်သိသင့်သောအရာ
ယနေ့စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အမိုးအမျိုးအစားအသစ်များ၏အနက်အနည်းဆုံးသောတစ်ခုမှာ PVC အမိုးများဖြစ်သည်။ PVC ကိုပိုက်လိုင်းများအဖြစ်မကြာခဏမှတ်ယူကြသည်။ သို့သော်ဤစွယ်စုံသုံးပလပ်စတစ်ကိုအချို့သောအိမ်ခေါင်မိုးများနှင့်ပြားချပ်ချပ်ခေါင်မိုးများအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လူနေထိုင်ရာ ...
PVC ခေါင်မိုး - ဘာလဲ၊ ဘာအကျိုးရလဲ။
စီးပွားဖြစ်အမိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များသည်အမြှေးပါးအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များမှစဉ်းစားနိုင်သည်စီးပွားဖြစ်အမိုးအမြှေးပါးတစ်ခုမှာ PVC ခေါင်မိုးသို့မဟုတ် Polyvinyl chloride, ပြားပြားသို့မဟုတ်နိမ့်နိမ့်နိမ့်သည့်တစ်ခုတည်းသောအမိုးမိုးအမိုးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ အညီ ...
Covid-19 သက်ရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြှင့်တင်သတ္တုပြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်စျေးကွက်သုတေသနအစီရင်ခံစာထူးချွန်သောတိုးတက်မှု၊ ဒေသများနှင့်အဓိကကစားသမားများ၊ အမျိုးအစားများ၊ လျှောက်လွှာများ၊
“ Corrugated Metal Sheet Market” ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သည်နယ်ပယ်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ အဓိကတွေ့ရှိချက်များ၊ မြှင့်ထားသောသတ္တုပြားများစျေးကွက်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ XX သန်းမှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ XX သန်းအထိတိုးတက်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
Corrugated Metal Sheet Market Report 2019-2025 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်း၊ စျေးကွက်နှင့်ခန့်မှန်းချက်
UpMarketResearch သည်စက်မှုလုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ၂၀၂၅ မှ ၂၀၂၅ အထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတ္တုပြားဈေးကွက်၏ခန့်မှန်းချက်နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည်အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပြီးဖောက်သည်များအားအသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများမှတစ်ဆင့်အပြိုင်အဆိုင်အားသာချက်ကိုပေးသည်။ ယခုနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာသည် ...
ထုတ်လုပ်မှု၊ ဒေသ၊ အမျိုးအစားနှင့်အသုံးချမှု (ဒေတာအခြေအနေ ၂၀၁၁၉ နှင့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်ခန့်မှန်းချက်) အရခွဲခြားထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိခေါင်မိုးအမိုးစျေးကွက် (တန်ဖိုး၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စားသုံးမှု) ကိုအစီရင်ခံစာတွင်မိတ်ဆက်ထားသည်။ ဤလေ့လာမှုသည်စျေးကွက်အခြေအနေ၊ စျေးကွက်ဝေစု၊ တိုးတက်မှုနှုန်း၊ အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၊
အနာဂတ်ဆောက်လုပ်ရေးလမ်းကြောင်း - သတ္တုအမိုးခုံး
နိဒါန်း - သတ္တုခေါင်မိုးသည်ကျယ်ပြန့်စွာနှင့်သက်တမ်းကြာရှည်သောကြောင့်လူကြိုက်များလာသည်။ ပံ့ပိုးသူဖြစ်သူ Scott Gibson သည်ပစ္စည်းများမှတပ်ဆင်ခြင်းအသေးစိတ်အထိသတ္တုခေါင်မိုးအတွက်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သတ္တုခေါင်မိုးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရပ်တည်ချက်၏ဖော်ပြချက်များပါဝင်သည် ...
စွန့်ပစ်ထားသောသံမဏိမျှင်စျေးကွက်သည်နိုင်ငံ၏အဓိကဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ စျေးကွက်အရွယ်အစား၊ SWOT ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ လျှောက်လွှာများ၊
Home / Galvanized Steel Strand Wire Market သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်အဓိကတိုင်းပြည် / ဒေသအချက်အလက်များ၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ စျေးကွက်အရွယ်အစား၊ SWOT ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ လျှောက်လွှာများ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ခန့်မှန်းချက်များပါ ၀ င်သည်။ CAGR, ထုတ်လုပ် ...
စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ နယူးယောက် (Global News) -Reportlinker.com သည်“ Global Roofing Industry” အစီရင်ခံစာ၏ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများပြီးစီးရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်စီမံကိန်းအများစုကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်သည်။ ယာယီပြန်လည်နေရာချထားရေးအမိန့်များ၊
အဘယ်ကြောင့် Asbestos ခေါင်မိုးအုတ်ကြွပ်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မသန့်ရှင်းသင့်ပါသနည်း (Asbestos ခေါင်မိုးကြွေပြားများ၏သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်သောအားသာချက်)
Asbestos နှင့်ထိတွေ့မှုအတွက်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုဖြစ်ပွားနိုင်သည်၊ အဓိကအားဖြင့်ဆယ်စုနှစ်များစွာနေရာတိုင်းတွင်ကျောက်ဂွမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ် (အကယ်၍ သင့်အိမ်) ပင်လျှင်ဤသေစေနိုင်သောပစ္စည်းနှင့်ပြည့်နေနိုင်သည်။ အိမ်ခေါင်မိုးကြွေပြားများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။ သို့သျောလညျး, ဒီ, သင်, သင်၏fကိုထားစေနိုင်သည်
Asphalt shingle roofing ၏အားသာချက်များအောက်ပါအချက်များသည်သင်၏အိမ်အတွက် asphalt shingle roofing ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားနည်းချက်များဖြစ်သည်။ Asphalt shingle သည်လေအားမြှင့်တင်ရန်ပိုမိုအားနည်းချက်များရှိနိုင်သည်။ - စျေးပေါသောကတ္တရာအခါရေယုံများသည်လေပြင်းများပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည်။ ..
Self- catering အဆောက်အ ဦး များ၏သတ္တုခေါင်မိုးဒီဇိုင်းကိုစူးစမ်း
ဒီဆိုဒ်ကို Informa PLC မှပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကုမ္ပဏီများကလုပ်ကိုင်ပြီးမူပိုင်ခွင့်အားလုံးသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Informa PLC ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးသည်လန်ဒန် SW1P 1WG5Howick Place ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်များတွင်မှတ်ပုံတင်ထား။ နံပါတ် 8860726. သတ္တုခေါင်မိုးစနစ်များသည်ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အ ဦး ဒီဇိုင်းများတွင်လူကြိုက်များသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်သတ္တုအမိုးသည်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့သော်လည်းလွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကလူနေအိမ်များဆောက်လုပ်ခြင်းတွင်အနည်းငယ်သာပါဝင်ခဲ့သည်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်စျေးကွက်၏ ၃.၆% မျှသာရှိသည်။ စက်မှုကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခု၏အဆိုအရထိုအရေအတွက်သည် ထိုအချိန်မှစ၍ အကြမ်းဖျင်းလေးဆမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ? သတ္တုအမိုးမိုးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။